Nagu saabsan - Shaanxi Ruiwo Phytochem Co., Ltd.
Shanxi Ruiwo Phytochem Co., Ltd. oo ah shirkad wax soo saar tiknoolajiyad sare leh, oo u heellan cilmi-baarista iyo horumarinta, soo-saarka iyo iibinta dhirta dabiiciga ah ee laga soosaaray, monosour firfircoon, Waxyaabaha ay ka kooban tahay. Waxaa naga go'an inaan siinno alaab joogto ah iyo adeegyo casri ah macaamiisha ku shaqeeya warshadaha dawooyinka adduunka, daryeelka caafimaadka, qurxinta iyo wixii la mid ah.
Si loo hubiyo in la helo alaab daawo oo sax ah oo tayada ugu sareysa leh, Ruiwo waxay sameysay nidaam caalami ah oo loogu talagalay alaabada ceeriin. Iyo si loo ilaaliyo tayada sare ee alaabta ceeriin, Ruiwo waxay dhistay saldhigyo dhir dhir adduunka oo dhan.
Ruiwo waxay muhiimad sare kuleedahay dhismaha nidaamka tayada, ee laxiriira tayada nolosha, waxayna fulisaa heerarka GMP si adag si loo ilaaliyo tayada sare. Haddana waxaan u gudubnay shahaadada 3A, ISO9001, ISO14001, HACCP, Kosher, Xalaal iyo shatiyada wax soo saarka cuntada (SC). Ruiwo waxay leedahay sheybaar caadi ah oo ku qalabeysan qalab buuxa, oo ay ku jiraan aaladaha loo adeegsado TLC, HPLC, UV, GC, microbiological tests iyo wixii la mid ah. Sidoo kale, Ruiwo waxay abuurtay iskaashi istiraatiiji ah oo qoto dheer oo lala yeesho shaybaarrada tijaabada saddexaad ee adduunka oo dhan caan ka ah sida SGS, Eurofins, Leon Testing iyo PONY Testing, si wada jir ah loo hubiyo awooddeena xakamaynta tayada alaabta adag.
In kabadan 3000 tan
Soosaarka sanadlaha ah ee dawooyinka Shiinaha
In kabadan Todobo
3A, ISO9001, ISO14001, HACCP, Kosher, Xalaal iyo liisanka wax soo saarka cuntada (SC)
Ka samee saddex saldhig oo wax soo saar ah Malaysia, Xianyang iyo Ankang
In ka badan afar
La aasaasay iskaashi istiraatiijiyad qoto dheer leh shaybaarada tijaabada saddexaad ee adduunka oo dhan caan ka ah sida SGS, Eurofins, Leon Testing, PONY Testing, iwm.
Markay Ruiwo horumariso, si loo wanaajiyo awoodda tartanka suuqa, waxaan si aad ah oo dheeri ah u bixinnaa maareynta nidaamsan iyo hawlgalka xirfadeed, waxaanna si isdaba joog ah u wanaajinaynaa awooddeenna cilmi baarista ee u gaarka ah.
Ujeedada kor uqaadista joogtada ah ee awoodeena dhameystiran, waxaan iskaashi la yeelanay cilmi baaris cilmiyeed iyo cutubyo waxbarid sida Northwest University, Northwest Beeraha iyo Dhirta, Shanxi Normal University, Shanxi Pharmaceutical Group iyo wixii la mid ah. Oo waxaan si wada jir ah u aasaasnay ​​shaybaarada R&D si aan u horumarinno alaabooyin cusub, u hagaajinno geeddi-socodka wax soo-saarka, iyo kor u qaadista wax-soo-saarka.
Ruiwo waxay ka sameysay seddex saldhig oo wax soo saar dalka Malaysia, Xianyang iyo Ankang.
Waxaan leenahay khadad wax soo saar oo fara badan oo wata qalab loogu talagalay soo saarista, kala soocida, isku soo uruurinta, qallajinta, iwm ee soo saarista dhirta badan. Waxaan awood u leenahay in aan sanad walba ka baaraandegno ku dhowaad 3,000 oo tan oo ah qalab daawo oo Shiine ah, iyo in aan sannad walba soo saarno 300 tan oo ah alaabada ceyriinka ah ee Shiinaha laga soo daweeyo. Iyadoo la adeegsanayo nidaamka wax soo saarka heerka GMP iyo tiknoolajiyada waxsoosaarka warshadaha ee heer sare ah iyo habab maareyn, waxaan u heellan nahay inaan macaamiisha ku siino warshado kala duwan wax soo saar tayo leh oo hubaal iyo sahay xasilan oo ay la socdaan adeegyo kaalmo heer sare ah.
Aragtidayada shirkaddu waa inay adduunka ka dhigto mid caafimaad iyo farxad leh.
Iyada oo ku xidhan faa'iidooyinkayada gaarka ah ee alaabada ceeriin ee la soo dhoofiyo, waxaan sii wadi doonnaa inaan raacno ujeedada la xiriirta tayada nolosha, iyo inaan si adag u xakameyno tayada alaabteenna. Sidan oo kale, waxaan awood u leenahay inaan ugu adeegno macaamiisha warshadaha dawooyinka, cuntada caafimaadka iyo is qurxinta, iyo inaan ku darno qiime cusub alaabada.